Rag loo qabtay kufsi iyo dil loogu geystey Muqdisho Xamdi Maxamed Faarax | Jowhar Somali news Leader
Home News Rag loo qabtay kufsi iyo dil loogu geystey Muqdisho Xamdi Maxamed Faarax
Rag loo qabtay kufsi iyo dil loogu geystey Muqdisho Xamdi Maxamed Faarax
Ciidamada Booliska magaalada Muqdisho ayaa u xirey illaa afar ruux fal isugu jiray kufsi iyo dil oo loogu geystay Xaafad ka tirsan degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir Xamdi Maxamed Faarax.
Afhayeen u hadlay ciidamada Booliska ayaa sheegay in baaritaan lagu sameyn doono dadka lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen falka lagula kacay allaha u naxariistee Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd ardaydii dhowaan ku gudbay imtixaankii dugsiga sare.
“Afar eedaysane ayaan u haynaa, gabdha la kufsaday dabaqa Muqdishona laga soo tuuray, waxaa socota baadhis-qoto-dheer, waxaana umadda Soonaaliyeed si dhow ula wadaagi doonnaa natiijada oo dhammaystiran” ayuu yiri Afhayeenka Booliska Saadaq Aadan Cali.
Allaha u naxariistee Marxuumad Xamdi oo saaka lagu aasay Qabuuro ku yaalla Magaalada Muqdisho ayaa laga soo tuuray guri dabaq ah oo ku yaal xaafada Maajo ee magaalada Muqdisho kadib markii kufsi wadareed loo geystey.
Falkan loo geystey gabadhan Soomaaliyeed ayaa ah mid ka mid ah falalkii ugu naxdinta badnaa eek a dhaca dalka,waxana ehelada gabadhan la diley ay dalbadeen in ay caddaalad hesho Marxuum Xamdi Maxamed Faarax.